Ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ na azụ na azụ gị! | Martech Zone
Sunday, October 19, 2008 Sunday, Jenụwarị 13, 2013 Douglas Karr
Mgbasa mgbasa ozi bụ azụmahịa na-aga n'ihu ugbu a, ọbụlagodi na nsogbu akụ na ụba anyị. Ekwenyere m na e nwere ihe atọ kpatara nke a:
Mgbasa mgbasa ozi bụ ihe na-eme ka ọ sie ike ma ọ bụ mee ịnyịnya ibu.
Mgbasa mgbasa ozi bụ usoro dị ọnụ ala, na-achọ oge mana ọ bụghị ọtụtụ ihe dị oke ọnụ.
Mgbasa mgbasa ozi bụ ụzọ bụ isi nke abụọ nnweta (Search engines hụrụ ya n'anya) na njigide (na-eme ka nkwukọrịta na mmekọrịta).
Nsogbu nke soshal midia abụrụwo ihe ewu ewu na ọ na-amalitezi ịmepụta ndị ọkachamara mpaghara. Ndị a arụ ọrụ na mgbasa ozi, ịre ahịa, na / ma ọ bụ teknụzụ n'ịntanetị ruo ọtụtụ afọ, mana ha gbagara na mgbasa ozi mmekọrịta n'ihi na ịmara mkpa na ikike. Ndị a bụ ndị ọkachamara mpaghara atọ:
Ebe a na Indianapolis, M na a na-arụ ọrụ na Kyle Nwachukwu maka afọ gara aga ma ọ bụ karịa. Kyle na-agbasi mbọ ike igosi onwe ya na mpaghara Social Media ọkachamara. Mee ọchụchọ nke Social Media Indianapolis, na ị ga-ahụrịrị Kyle họọrọ # 1!
Ọ bụghị ihe ijuanya, Kyle nwere ịhụnanya na-adịgide adịgide nke onye na-ajụ ase - ị ga-ahụ ya 24/7 na-eme mmekọrịta Enyi na enyi, Obere Indiana, na ebe ọ bụla ọzọ enwere ike ịntanetị. Ọ na-arụ ọrụ yana ndị ahịa sitere na ụlọ ọrụ ọ bụla ebe a n'obodo ma na-eme ka ịnụ ọkụ n'obi ya maka ire ahịa n'ịntanetị n'ime atụmatụ ọ bụla.
N'oge na-adịbeghị anya Nna-ukwu nke Azụmaahịa N'ịntanetị, agara m nnọkọ Jason nnọkọ Social Media Strategies: Marketingzụ ahịa na Web 2.0 World. Jason saịtị Onye nyocha ihe ọhaneze bụ nke m na-eso kemgbe nwa oge. M na-eme atụmatụ na-agbada Louisville ruo oge ụfọdụ ụfọdụ iji hụ Jason mana ihe na-abanyekarị n'ụzọ… Obi dị m ezigbo ụtọ na anyị mechara zute!
Mgbe m na-arụ ọrụ na ahịa, ahịa nchekwa data, na teknụzụ nke ahịa maka afọ iri gara aga, Jason na-arụ ọrụ na Ọha na Ọha na Ọbara nke azụmahịa. Ọ na-atọ m ụtọ ịgụ blọọgụ ya n'ihi na ọ bụ ihe m na-anaghị ahụkarị na tebụl. Gbalia igbakwunye Social Media Explorer na-eri nri gaa na ndepụta ọgụgụ gị. N'ịgwa Jason okwu na mmemme ahụ, asọpụrụ m na ya onwe ya na-agụ blog m!
Mike nwere ike ịbụ nwoke kachasị mma na mgbasa ozi mmekọrịta! Mụ na Mike na-esochi blọọgụ ibe anyị kemgbe afọ ole na ole ugbu a. Ya blog, Nkwenye Na-elekwasị anya na iji blọọgụ iji nyere aka mee ka azụmahịa na obodo.
Kedu onye nọ n’azụ ụlọ gị?
Chọta onye na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na mpaghara bụ isi ihe maka azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ị na-eleba anya na ego gị na ihe ka ọtụtụ n'ime ego gị na-enweta na mpaghara, mgbe ahụ ị kwesịrị ịchọpụta ka ndị ọkachamara mpaghara si dị. Ha nwere ike iwebata gị na netwọkụ na mkpakọrịta ndị ga-akwalite ọtụtụ azụmahịa na azụmaahịa gị, nyere gị aka na mgbasa ozi mmekọrịta mmekọrịta mpaghara, ma kwue ihe omume mpaghara.
Y’oburu na ibu onye okacha amara nke ndi mmadu na obodo ozo ma obu obodo ozo, nweere onwe gi ikwu okwu n’ebe a banyere onye gi, ebe ino, na ihe iguru aka n’ime ya. Ikekwe oge eruola mgbe anyi ga amalite akwukwo nke anyi
Tags: jason dara
Ọkt 19, 2008 na 2:26 PM
Amaghị m ma ọ bụ maka na abụ m onye Canada ma ọ bụ ikekwe maka na akpọtụbeghị m onwe m "onye na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya" na ọ na-esiri m ike ịkpọ onwe m. Ikekwe ọ bụ maka na amaghị m etu m ga-esi kọwaa ihe “onye ọkachamara n’ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya” bụ? Na-agụ post Chris Brogan (http://www.chrisbrogan.com/what-i-want-a-social-media-expert-to-know/) Enwere m ike ịkọwa onwe m dị ka otu. Gụ ụfọdụ ederede site na ndị ị depụtara, enwere m ike ịdaba na ụdị ahụ, mana m ga-achọ ilekwasị anya na mpaghara ndị ọzọ yana mgbasa ozi mmekọrịta. Ikekwe nke ahụ nwere ike ịbụ ọkwa ọzọ gị. Kedu ihe bụ ọkachamara na mgbasa ozi mmekọrịta?
Ọkt 20, 2008 na 8:32 AM
M wedara onwe m ala site iti mkpu na post. Ana m ekele gị nke ukwuu maka mmesapụ aka ị na-enye m n'afọ gara aga. Ekwela ka ọ ghọgbuo gị, Doug bụ otu n'ime ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na MidWest.
LGR: echiche nke ịbụ onye ọkachamara na-elekọta mmadụ na-emeghe kpamkpam. Ekwuola m echiche m banyere leta ahụ (nke a na - akpọghachi azụ na Brogan). Nwere ike ịbụ onye nkwụnye mmalite ma ọ bụ onye na-anabata geuine.
Ọkt 20, 2008 na 2:27 PM
Nke a bụ nnukwu ọkwa, ma kwesiri ichetara anyị na anyị ekwesịghị ịga "ụwa niile," ọ bụchaghị, inwe mmetụta na mgbasa ozi mmekọrịta. Na Austin, anyị na-agwa ndị nwe azụmaahịa mpaghara gbasara ihe anyị meworo ma dụọ ha ọdụ gbasara ngwaahịa anyị. Ihe atụ nke mkpọsa ahịhịa n'ime ụlọ bụ mkpọsa na-ewe ndị ọrụ Facebook, ebe onye ọ bụla nọ na Bazaarvoice nwere akaụntụ FB ruru na netwọkụ ha n'otu oge (anyị mere ka nleta saịtị na ntugharị na-arịwanye elu).
Ọ dị mma ịmara na ndị mmadụ na-emekọrịta ihu na ihu yana n'ịntanetị!
Aha ya bụ Matthew Chamberlin
Ọkt 21, 2008 na 4:41 PM
Enwere m mmasị n'echiche nke ndekọ mpaghara. Nke a bụ mpaghara ọzọ anụpụtara na: Miami, FL.
M na-agba Social Media / New Media Consultancy nke dị na Miami akpọ Clearcast Digital Media. Nko anyị bụ na n'ihi afọ 15 m nke ahụmịhe dịka onye na-emepụta TV, anyị na-ewepụtakwa ọdịnaya vidiyo na vidiyo. N'aka ozo, anyi na enyere aka weputa ma kesaa ma kesaa ozi gi.
Miami bụ ahịa na-atọ ọchị na, n'ụzọ ụfọdụ, na-adịkarị ka mba dị n'azụ obodo ahụ. Mgbe m kwusịrị nke ahụ, ana m eche ebe "mba ndị ọzọ" dị na ụlọ ọrụ ndị na-achọ n'èzí maka enyemaka SM.
Ọkt 22, 2008 na 9:11 AM
Enwere m mmasị na echiche nke ndekọ mpaghara mpaghara. Nke a bụ mpaghara ọzọ nụrụ; mmmmmmmmmmmm, FL